اموزش یک | Sababaha hurdo la’aanta – Ogow sababta oo daawee
Sababaha hurdo la’aanta – Ogow sababta oo daawee
Maxaa sababa lulmida? Sababo badan oo hurdo la’aan ayaa sababi kara waxyaabo kala duwan: duulimaadyo dhaadheer, waxyaabo carqaladeeya jimicsiga caadiga ah ee hurdadu markay qabato, ama howlaha sida wadista dheer. In kasta oo inbadan oo naga mid ahi dayacaan hurdo buuxda, waxa jira dhibaatooyin kale oo la xidhiidha hurdada. Kuwaas waxaa ka mid ah hurdada hurdada, xanuun lugaha ku nasto, iyo hurdo la’aan. Dadka ka shaqeeya xabaalaha ama shaqooyinkoodu u baahan yihiin isbeddello ayaa laga seexdaa. Tan waxaa u sabab ah hurdo daran habeenki iyo awood la’aanta ay ku helaan hurdo kufilan maalintii.
Sababaha hurdo la’aanta
Dadka waaweyn badankood waxay u baahan yihiin 2 ilaa 4 saacadood oo hurdo ah habeenkii ah hurdo la’aan darteed. In kasta oo qaarkood u baahan yihiin wax badan ama ka yar qaddarkaan si jirkoodu u nasto si habboon. Schweiz ayaa yidhi: “Dhibaatooyinka hurdada, hurdo ku filan iyo hurdo xumo ayaa leh cawaaqib xumo.” Hurdo la’aanta ayaa si dhaw loola xiriirinayaa arrimaha caafimaad ee ugu waaweyn xilligeenna. Dhibaatooyinka sida dhiig karka, cudurka wadnaha, istaroogga, sonkorowga, buurnida iyo cayilka
Sababaha Hurdo La’aanta Haddii indhahaagu ay xidhan yihiin oo keliya laakiin aad dareento hurdo, waxaa laga yaabaa inaad qabtid cilado xagga hurdada ah. Dhibaatooyinka hurdo la’aantu waxaa ka mid ah karti la’aanta qofku inuu seexdo ama sii wado hurdo ama dabeecado hurdo la yaab leh, sida hurdada. Dhibaatooyinka kale ee hurdada qaarkood waa daqiiqad, sida weerarada hurdada. Inta lagu jiro weerarada hurdada, mid ayaa si aan la xakamayn karin u seexanaya maalintii oo dhan. Markay bukaanku tagayaan xarunta hurdada ee Davila, waxay marka hore rabtaa inay ogaato inay dhibaatadu tahay tirada ama tayada hurdadeeda. “Su’aasha ugu horeysa ee dhakhaatiirta wax ka weydiiyaan hurdadooda waa inay hurdaan ku filan,” ayay tiri. Miyey seexdaan gebi ahaanba? Tani waa su’aal muhiim ah. Sababtoo ah waxaan aaminsanahay in dad badani ay dhibaatadan haysato. Iyagu waa qayb ahaan ama si aan kala go ‘lahayn mararka qaarna hurdo la’aan ayaa haysa. Davila waxay raadisaa tayo haddii ay hubto in macaamiisheeda aysan dhibaato ku qabin hurdada si ay u eegaan haddii ay qabaan hurdo xumo.
Sababaha Hurdo La’aanta Marka loo eego joornaalka joornaalka Naadiga Saxafiyiinta, had iyo goor ma ahan hurdo la’aan iyo daal, hurdo la’aan ama shaqo badan. Waxaa jira sababo badan oo kugu kalifaya inaad daal dareysato marwalba.
Daraasadaha ayaa muujinaya in dadka seexda in ka badan 9 saacadood habeenki ay halis ugu jiraan cudurro ay ka mid yihiin sonkorow iyo buurnaan ka badan kuwa kale.
Sababta hurdo la’aanta badan waa baahi dabiici ah, qof walbana wuxuu ubaahan yahay 6 saacadood oo hurdo faa iido ah maalintii .. Markuu hurdo kaco dadku waxay hurdaan hurdo la’aan. Tirakoobyadu waxay muujinayaan in 1.6% dadka dunida ku nool ay la il daran yihiin hurdo xanuun taasina waa ay sii kordheysaa.
4 sababa oo daal iyo hurdo la’aan:
Sababaha Caabuqyada Hurdo La’aanta: In kasta oo caabuqyadu ay leeyihiin astaamo muuqda, hadana waxay mararka qaarkood ku faafi karaan jidhkaaga adiga oo aan dhakhtar ku arag ama ogaanin. Tusaale ahaan, ciladaha nidaamka difaaca jirka, infekshanku wuxuu ku noqon karaa daal daran.
Sababaha Kacaya Xasaasiyada: Waxaa xiiso leh in la ogaado in maadada loo yaqaan ‘histamine’ iyo kiimikooyinka kale ee jirka uu qarsado si uu ula dagaallamo xasaasiyadda waa hypnotic. Hurdo la’aanta ayaa sababa hurdo la’aan.
Sababta hurdo-la’aanta xad-dhaafka ahi waa dhiig-yaraan (Unugyada dhiigga) unugyada dhiigga cas ee weyn waxay ka shaqeeyaan inay oksijiinta uga soo baxaan sambabaha xubnaha kale. Marka qofku uu ku yaraado unugyada cas cas ama unugyada dhiigga, ayaa qofku noqonayaa dhiig yaraan isla mar ahaantaasna wuxuu dareemayaa daal aad u badan oo aan awoodin inuu sameeyo howla maalmeedkiisa.
Cilladaha Xiisaha Leh: Haweenka dhexdiisa, estrogen-ka oo yaraada ayaa inta badan u horseedi kara miisaan lumis iyo daal.
Fiiri fiidiyowgan si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa sababay lulmo.
برچسب‌ها:mororgar, murugadoss, murugame, murugame info soccer stars, murugame soccer stars, murugame.info/csr 2-keys/, murugame.info/need for speed no limits, murugame.info/tank stars, murugan, murugan god, murugan hindu god, murugan image download, murugan padal, murugan photos, murugan photos 3d, murugan photos hd, murugan swamy picture, murugan temple ulsoor, murugan university of hyderabad, murugan vs tiger
Previous Previous post: Nimbulkeun rasa ngantuk – Nyaho kana sabab sareng ngubaranana
Next Next post: නිදිබර වීමට හේතුව – හේතුව දැනගෙන එයට ප්‍රතිකාර කරන්න